Home / Itinye n'ọkwa akara igwe / Aluminom Foil Sealing Machine na itinye n'ọkwa Heating
Category: Itinye n'ọkwa akara igwe Tags: aluminom nwere ike ịkụnye ihe eji ekpuchi, aluminum foil itinye n'ọkwa sealer, aluminom foil induction akara, aluminum foil sealer, aluminum foil akara igwe, zụta ihe mkpuchi ọkụ, okpu sealer igwe, okpu akara igwe, igwe mkpuchi akara electromagnetic, enercon itinye n'ọkwa sealer, foil akara igwe, ikpo ọkụ ọkụ ọkụ, induction okpu sealer, igwe mkpuchi ihe mkpuchi, induction sealer, Ọnụ mmịnye ọkụ, induction akara, igwe mkpuchi ihe mkpuchi, igwe akàrà
Kedu ihe bụ "Induction aluminum foil sealing machine"?
Itinye n'ọkwa Aluminium Foil akara igwe a na-eji maka eyi, Pee, PITA, PS, ABS, HDPE, LDPE na karama iko, nke na-eji ụkpụrụ electromagnetic eme ihe iji mepụta ọkụ ọkụ ọkụ ozugbo iji gbazee aluminom na-esochi oghere nke karama ahụ, na-eru ebumnuche nke ihe akaebe mmiri , leakage-àmà, ebu-na-àmà na ịgbatị ichebe oge.
Otu ụdị nke akara dị n'ime bụ akara abụọ dị n'ime nke na-ahapụ akara nke abụọ n'ime mkpuchi ozugbo ewepụla akara mmịpụta. A na-ejikarị ya eme ihe ebe nsogbu na-emetụta. Nhọrọ ọzọ bụ otu akara dị n'ime ebe ọ bụla ewepụla akara mmịpụta ahụ, ọ nweghị liner fọdụrụ na mmechi ahụ. Nwekwara ike ịhọrọ site na akàrà ndị nwere pịịlk ma ọ bụ ndị nwere akara peelable na-ahapụ ihe fọdụrụ na karama ahụ. Ikwesiri ighota na uzo ozo di na ihe karama.
Akara dayameta 60-180mm 50-120mm 15-60mm
Ọsọ akara 20-300 karama / min
Oru akara 20-280mm 20-180mm
Max Ike 2500W 1800W 1300W
ọsọ ọsọ voltaji Otu oge, 220V, 50 / 60Hz
Ngwa ọdabara Eyi, Pee, PITA, PS, ABS, HDPE, LDPE na iko karama, Plastic karama ọnụ aluminum foil film
Arọ 72kg 51kg 38kg